RIU Hotels & Resorts dia manokatra hotely vaovao any Bulgaria
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » RIU Hotels & Resorts dia manokatra hotely vaovao any Bulgaria
RIU Hotels & Resorts dia nanokatra trano fandraisam-bahiny vaovao any Bulgaria, ny Riu Astoria, fananana vaovao feno kintana 4 kintana rehetra izay hahagaga ny vahiny ny fanamboarana sy ny serivisy maoderina. Ao amin'ny Golden Sands no misy azy, toerana iray heverina ho firavaka amin'ny Ranomasina Mainty ary iray amin'ireo perla any Eropa Atsinanana. Io no hany trano fandraisam-bahiny misy ny rojo ao Golden Sands ary ny fahenina any Bulgaria, miaraka amin'ireo fananana efa napetraka amin'ny toeran-kaleha toa an'i Obzor, Pravets ary Sunny Beach.
Nisokatra tamin'ny 26 aprily ny Riu Astoria ary hiasa mandritra ny vanim-potoana fahavaratra. Izy dia manana toerana misy tombontsoa ao Bulgaria, 37 km fotsiny avy eo amin'ny seranam-piaramanidina Varna, ao amin'ny faritra mangina ao amin'ny Resa-Golden Sands ary akaikin'ny faritra misy azy, fivarotana, bara ary trano fisakafoanana. Ny hotely Riu Astoria dia miorina eo akaikin'ny fidirana amoron-dranomasina. Ny morontsiraka fasika lava mirefy 7 km dia manodidina ny 80 m miala ny hotely. Misy faritra amoron-dranomasina kely eo anoloan'ny hotely, natokana ho an'ny vahiny ihany, miaraka amin'ny tanamasoandro sy solazy maimaim-poana.
Ankoatry ny eo akaikin'ny morontsiraka sy mora azon'ny seranam-piaramanidina, ny hotely dia eo amin'ny toerana mety indrindra ho an'ireo vahiny hijerena ny sasany amin'ireo mari-pamantarana malaza indrindra ao amin'ny firenena toy ny tanànan'i Varna, ny tanàna ary ny Botanic Garden an'i Balchik, Cape Kaliakra ary ny Monasiteran'i Aladzha.
Horohoron-tany mahery no namely an'i Kyushu any Japon, tsy nisy fampitandremana tsunami navoaka